ပေကျင်းအိုလံပစ်ကို အမေရိကန်က “သံတမန်ရေးရာ သပိတ်မှောက်” ခြင်းသည် မိမိကိုယ်ကို တိုက်ရိုက် “နိုင်ငံရေးပြက်လုံးထုတ်ခြင်း ” ဖြစ်ဟု ကုလကိုယ်စားလှယ်ပြော - Xinhua News Agency
ကုလသဂ္ဂ ၊ ဒီဇင်ဘာ ၈ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပေကျင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်အားကစားပြိုင်ပွဲအား “ သံတမန်ရေးရာသပိတ်မှောက်ခြင်း” ဟု ပြောဆိုနေမှုသည် အမေရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိကိုယ်ကို တိုက်ရိုက်ပင် “နိုင်ငံရေးဟာသပြက်လုံး” တစ်ခုထုတ်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။“ ပေကျင်း ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ နဲ့ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွေဟာ ဆောင်းရာသီအားကစားနည်းများပြိုင်ပွဲဝင်ကြမယ့် အားကစားသမားတွေ အားလုံး နဲ့ ကမ္ဘာတစ်လွှားက ပရိသတ်တွေအတွက် စုစည်းကြမယ့်နေရာပါ ။ သူတို့အနေနဲ့ အဲဒါကိုပဲ မီးမောင်းထိုးပြသင့်ပါတယ် ။ အဲဒီပြိုင်ပွဲကြီးရဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ လက်တစ်ဆုတ်စာ နိုင်ငံတွေရဲ့အစိုးရအရာရှိတွေ တက်ရောက်မှုကို အားမကိုးပါဘူး” ဟု တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်၏ အမည်မဖော်လိုသူ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
“ အိမ်ရှင်နိုင်ငံအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံဟာ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်နဲ့ မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွေအတွက် အားကစားသမားတွေနဲ့ဧည့်ပရိသတ် အားလုံးကို တံခါးဖွင့်ကြိုဆိုဖို့ အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ အဲဒီပြိုင်ပွဲကိုမလာရောက်ချင်သူတွေအနေနဲ့ အဖြေက ခင်ဗျားတို့ ဒီပြိုင်ပွဲကို လာသည်ဖြစ်စေ ဒါမှမဟုတ် မလာသည်ဖြစ်စေ ၊ ပေကျင်းဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲနဲ့မသန်စွမ်းအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကတော့ ရှိနေအုံးမှာပဲ။ ပြီးတော့ အောင်မြင်မှုရမှာပါ” ဟု ထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အမေရိကန်အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် စစ်အေးခေတ် အမူအကျင့်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည်။ အမေရိကန်အနေဖြင့် အားကစားကို နိုင်ငံရေးလုပ်ကာ အကွဲအပြဲများဖြစ်အောင်ဖန်တီးခြင်း နှင့် တမင်သက်သက် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်ခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ယင်းချဉ်းကပ်မှုပုံစံသည် ထောက်ခံမှုမရဘဲ အဆုံးသတ်တွင် ကျရှုံးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။(Xinhua)
U.S. “diplomatic boycott” of Beijing Games self-directed political farce: Chinese UN mission
UNITED NATIONS, Dec.7(Xinhua) — The so-called “diplomatic boycott” of the Beijing 2022 Winter Olympics by the United States isaself-directed political farce, saidaspokesperson of the Chinese UN mission on Monday.
The U.S. government’s decision reflects its Cold War mentality. The United States just wants to politicize sports, create divisions and provoke confrontation. This approach will find no support and is doomed to fail, said the statement.
Photo- Skaters compete during the speed skating test program for the 2022 Olympic and Paralympic Winter Games at the National Speed Skating Oval in Beijing, capital of China, April 10, 2021. (Xinhua/Ju Huanzong)